Kooxda Juventus oo noqotay Championka horyaalka Serie A markoodii 8-aad oo xiriir ah kaddib guul ay ka gaareen Fiorentina +SWiro – Gool FM
( Italy) 20 Abriil 2019 Kooxda Juventus ayaa guul 2-1 ah ka gaartay Kooxda Fiorentina iyaga oona noqday markii sideedaad oo xiriir ah Championka horyaalka Italy.
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedkii u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Fiorentina ayaa ku hishiiyey bar baro 1-1 xili labada Kooxaba ay soo bandhigeen ciyaar cajiib ah.
Kooxda martida aheyd ee Fiorentina ayaa biliwgii hore ee ciyaartaba gool kaga naxsatay Kooxda Juventus waxaana u dhaliyey laacibkooda Milenkovic daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta.
Juventus oo uu xaalka ku xumaaday kaddib markii laga dhaliyey gool ayaa weeraro is daba joog ah ku qaaday shabaqa kooxda Fiorentina blase ugu dambeen waxa ay la yimaadeen goolka bareejada ee ciyaarta kaas oo uu dhaliyey daafaca dambeedka bidix ee Alex Sandro kaddib caawin uu ka helay Pjanic daqiiqadii 36-aad ee ciyaarta.
Ciyaartoyda Labada dhinac waxaa soo maray fursado kale oo gool loo maleesan karay balse midna jaanisyadaas kama uusan faa’ideysan in ay gool u badalaan.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa hore ayaa lagu kala nastay bar-baro 1-1, muddo kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Kooxda Juventus oo marti loo ahaa ayaa qeebtii dambe ee dheesha la timid kubad weerar ku dhisan iyaga oona bilowgii hore ee qeebtii dambe ee ciyaarta ay u suura gashay in ay helaan goolkooda labaad ee ciyaarta wallow goolkaas uu ahaa mid kam ah oo uu iska dhaliyey Pezzella daqiiqadii 53-aad ee ciyaarta.
Cajuusta ayaa 2-1 ku qabatay hogaanka ciyaarta wollow Kooxda Fiorentina ay sameeyeen isku dayo badan oo aan goolka lala beegsan.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Juventus iyo Fiorentina ayaa ku dhamaaday 2-1 oo ay guushu ku raacday Kooxda Juventus oo loo caleemo saaray hanashada horyaalka Serie A markii 8-aad oo xiriir ah.